Staff – Caalamka Online
Wararka ka imaanaya garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sheegaya in la diiday in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay ka dhoofaan garoonka, kaddib markii Maamulka Garoonka uu amar ku soo rogay in aanay wafdigaan ka bixi karin garoonka. Wafdigaan uu hogaaminayo shariif shiikh axmed ayaa hada ku sugan qeybta Nasashada VIP-da, islamarkaana loo sheegay in ...
Barakac balaaran ayaa ka socda Degmada Buulo Barde ee Gobolka Hiiraan iyada oo laga soo sheegaya halkaasi in laga cabsi qabo in uu samayn ku yeelato fatahaada Webiga Shabelle oo malmihii ugu danbeeyay meelo badan oo dalka ka mid ah ka jiray. Dadwaynaha Buulo Barde ayaa shalay bilaabay in ay guryahooda ka ka guuraan, waxa aynaha gaaraya deegaanada ka baxsan ...
Maxkamada ugu sareysa dalka Hindiya aya la safatay kooxaha Hinduuga iyada oo u xukuntay in lahanshiyaha masaajid ay qarniyo badan ku tukan jireen Muslimiinta dalkaas kaas oo ku yaala Magaalada ayodhi. Maxkamada ayaa la rumaysan yahay in ay gadaal ka riixayeen masuuliyiinta haysa tala sakaas oo ku sifaysan islaam nacayb, waxaana tawitter ku taageeray Ra’isul wasaaraha dib loo doortay ee ...
Xasan geeraarkan wuxuu curiyey markii uu arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo tacliin leh iyo kuwo kale oo aan laheynba oo intaa u xoogsi tegeya una dhoofaya dalal qalaad iyagoo dalkooda qawedsan. Isagoo markaa garanaya dhibaatada ay taasi u leedahay horumarka dalka, ayuu geerarkan dadka jaadkaasa ku guubaabina-yaa inay dalkooda aaminaan, khayraadka korkiisa iyo ubucdiisa buuxana iimaansadaan, kalana soo baxaan. ...
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay inuu horay uga digay Ahlusuna in aysan ku ballan-furin Madaxweyne Xaaf, kuna kadsoomin heshiiskii qarsoodiga ahaa ee ay horay u wada galeen dowladda Federaalka, kaasoo dhowaan Ahlusuna ku eedeysay inay dowladda ka baxday heshiiskaas. “Ahlusunna horay waxaan uga dignay in aysan ku ballan furin Madaxweyne Xaaf, kuna kadsoomin heshiiska khudba sirada ah ...